DC Module mpanamboatra & mpamatsy | China DC Module Factory
Tape LED azo ovaina malefaka misy andian-tsarimihetsika azo zahana miloko
Famaritana ny vokatra Ny elanelan'ny palette roa sosona Dimmer dia 2700K-5700K. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny jiro ara-barotra sy jiro amin'ny atmosfera ary ny herinaratra dia 6W-30W. Fampiharana: jiro ara-barotra, toy ny jiro, jiro, jiro, ary fotoana hafa mitaky fanovana ny habakabaka, tsenan'ny fanaka an-trano - miorina toy ny jiro ao an-trano, jiro gorodona, jiro rindrina, jiro latabatra fandriana ary toy izany koa Flexible LED Tape Dual Channel Colour Tunabl. ..
Famaritana ny vokatra Ny vokatra maodelin'ny jiro AC an'ny ShineOn dia mifototra amin'ny vahaolana IC drive anao. Ny endrika vokatra dia misy vokatra SMD DOB mahazatra, andian-tsarin'ny andiany AC-COB. Ampiasao ny drafitra drive linear, miaraka amin'ny teboka mampiavaka ny tselatra haavo ambany. Ny vokatra andiany AC-COB izay mampifandray ny teknolojia COB miiba sy ny teknolojia modely AC dia manana tombony mahaleo tena ShineOn, azo ampiasaina ho vokatra lehibe hanamafisana ny fandrakofana ny tsena. Ny vahaolana tselatra ambany matetika ...
Andian-tsarimihetsika LED tsy miovaova azo ovaina ankehitriny
Famaritana ny vokatra Ny karazana palette miloko tokana manjavozavo dia 2000K-3000K. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny tsena an-trano indrindra, ary ny heriny dia ambany 20W. Izy ireo dia fanoloana mivantana ny jiro jiro nentim-paharazana sy jiro halogen. Fampiharana: tsena fanaka ao an-trano - miorina toy ny jiro ao an-trano, jiro gorodona, jiro amin'ny rindrina, jiro latabatra am-pandriana ary toy izany koa ny Fomba fiasa ● Fanondroana CRI / Rf / Rg ambony (TM-30-18) ● Halavan'ny hazakazaka 5 metatra ● Spectrum feno 2835 LED ● Fanamiana, ...